Intlanzi yeserano yosapho lakwaSerranidae | Ngeentlanzi
URosa Sanchez | | Amanzi olwandle, Intlanzi
El Intlanzi yeserano, igama layo elithile ngu umbhali serrano, luhlobo lomzimba odibeneyo, nangona utyebile ngakumbi kunolo serranus cabrilla, Ukwahlula phakathi kwayo, kunye nentloko, ngakumbi, kunye nomsila, unciphisiwe okanye ujikelezwe. I-caudal peduncle yentlanzi ye-serrano ityebile ngomlomo omkhulu kwaye i-maxilla ibonakala, ngaphandle kwezikali okanye i-supermaxilla.
I-preopercle icocwe ngokupheleleyo kwaye i-operculum ineentsiba ezintathu ezithe tyaba. Inkqubo ye- izikali zincinci ngokwendlela, kumgca osecaleni iphakathi kwama-65 nama-75.
La Umbala wenza le serranid ibe ziintlobo ezingathandabuzekiyo kwaye ngokungathandabuzekiyo mhle, umva kunye nenxalenye yamagqabi anombala opinki okanye omdaka ngebala, kwaye anemigca emihlanu nesixhenxe emnyama emnyama enqamlezayo enqamlezileyo, indawo enkulu eblowu, ebonakala ngakumbi ngobudala nobungakanani bentlanzi, ithatha indawo yangaphakathi amacala asuka ngaphambili kumphambili wempundu, inxenye yentsimbi yomsila kunye nomsila mthubi.
Intloko yezi serranids yi-labyrinth eyiyo Imigca eluhlaza okwesibhakabhaka isikhumbuza ubhalo lwesiArabhu. Ngaphandle kokubonakala kwayo okumangalisayo, le ntlanzi yasezintabeni kunqabile ukuba igqithe 25cm ubude.
Intlanzi yeserano ihlala kwindawo ezinamatye amancinci kunye neengca ingca yaselwandle. Kubonakala ngathi kukho ulwahlulo lwe-bathymetric kunye ne-serranus cabrilla. Xa zombini iintlobo zinovelwano, uxinano lwe serranus scriba ithande ukwehla ngobunzulu, ngelixa i-serranus cabrilla inyuka.
Olu calucalulo lubonakala ngathi lubangelwa kukungabandakanywa kwindawo yokuhlala, kuthanda ukunciphisa ukhuphiswano oluthile, kuba xa enye yeentlobo ezimbini ingekho, okanye inqabile, enye ayizalisi ngokupheleleyo umsantsa, ulwabiwo olufanayo lokuhlambela.
Iserano ngu iintlanzi zodwa kunye nokuhlala okhusela ngokuqatha ummandla wakhe kwabanye abantu. Njengoninzi lwee-serranids, ngumzingeli weentlanzi okhohlakeleyo, othi azibambe ngasemva, nangona zitya ii-crustaceans, polychaetes kunye ne-mollusks.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Intlanzi yaseSerrano yosapho lakwaSerranidae